I-Sagittarius Sun Scorpio inyanga: Ubuntu obuyimfihlo - Ukuhambelana
Eyona Ukuhambelana I-Sagittarius Sun Scorpio inyanga: Ubuntu obuyimfihlo
I-Sagittarius Sun Scorpio Moon abantu bazimeleyo, banakho kwaye bahlala bephumelela kuyo yonke into abayenzayo. Aba bantu bayayazi into abayifunayo nendlela yokuyifumana. Kunokuthiwa zii-go-getter zodiac.
Emva kwayo yonke loo nto, kubo kukho isigwebo esifanelekileyo kunye nobulumko obukhulu beSagittarius edityaniswe nokuzimisela kweScorpio kunye nokukwazi ukuguqula yonke into abayifunayo ibe yiprojekthi. Kulula kubemi bale miqondiso ukuba bafeze nantoni na ababeke iingqondo zabo kuyo.
I-Sagittarius Sun Scorpio inyanga yokudibanisa ngokufutshane:
Iimpawu: Inamandla, inobulumko kwaye inobulumko
Izinto ezingalunganga: I-temperamental, blunt kunye novakalelo
Iqabane eligqibeleleyo: Umntu ongazukunikezela kwiimfuno zabo
Ingcebiso: Ngokuqinisekileyo kufuneka uqale ukukhetha amadabi akho kwaye ungangqubani kangako.
Ngenxa yokuba banamabhongo kwaye banethemba, kunzima ukuba boyiswe. Ngokucacileyo nangokuqiqayo, abo baneLanga kwiSagittarius kunye neNyanga eScorpio baya kuza nezicwangciso ezikhulu kunye nezicwangciso eziza kubanceda ukuba baqhubele phambili ngokukhawuleza kubomi bobuchwephesha kunye nobomi bobuqu.
Uphawu lweZodiac ngoFebruwari 14
Owona mceli mngeni mkhulu kubantu be-Sagittarius Sun Scorpio Moon kukuba babe ngoonozakuzaku, ubuchule kunye nokungakhathali. Aba bantu banokuba nembono engacacanga ebantwini nakwizinto ezenzeka kubomi babo.
Ukuba bafuna ukuphumelela, kufuneka baziphephe iingxabano kangangoko. Inyaniso yokuba bacinga ngokukhawuleza nangokufanelekileyo ayinakuphikwa. Kodwa kufuneka bangxami xa bengazukuchitha ezi mpawu zintle.
Amandla anamandla kwaye anamandla, ezi Sagittarians zinamandla aneleyo okuphumeza zonke iinjongo zazo. Bahlala bebuthathaka, kodwa xa behlaselwa, baba ngabalinganiswa abanoburharha. Ungayichazanga indlela abalunge ngayo ekuchongeni ubuthathaka babanye abantu kwaye ubenzakalise kakubi kakhulu.
Okukhona bephulaphula kwaye belawula iimvakalelo zabo, kokukhona baya kutsaleleka kubo. Ukuthanda iintlobo ezahlukeneyo kunye nokuzonwabisa okunomdla, aba bantu bakhululekileyo baya kuhlala bejonge ukuthatha umceli mngeni omtsha.
Ngethemba lokufumana imfihlo yosindiso, baya kuvukela kwaye bajoyine izinto ezininzi, ezilahlekileyo okanye ezinethemba elingaphezulu. Baneenjongo eziphakamileyo abazama ukuhlangabezana nazo ngokuba neenjongo ezintle kunye nobabalo.
Uyilo lwabo kunye nezakhono zokuphatha zingaphezulu kokucacileyo. Xa kuziwa kwindlela yabo ebomini, banesicwangciso esihle kwaye bayazi ukuba mabenze ntoni.
Badibanisa umbono, iinjongo kunye nomlinganiswa ogqithileyo weSagittarius ngamabhongo kunye nokuzimisela kweScorpio.
Kuba baneendlela zabo zokuphila nokusondela ebomini, ngamanye amaxesha abamameli izimvo zabanye abantu. Ziyacacisa kwaye zinobuhlobo, kodwa iinkolelo kunye nemigaqo yazo ayinakutshintshwa.
Kungenxa yoko le nto uninzi luza kucinga ukuba alukho kwaye alubandi. Okukhona beya kuba neemvakalelo, kokukhona baya kwenza izigqibo ezimbi kwaye bangaziboni izinto ngokucacileyo.
Abalinganiswa abangaqhelekanga, abantu be-Sagittarius Sun Scorpio Moon bahlala bevela esixekweni njengabaphuli-mthetho, abavukeli abangayithobeliyo imigaqo nemigaqo. Yintoni enomdla ngabo kukuba banokuzihlaziya ngalo lonke ixesha.
Abaswele nakancinci, banokubona ukuhlala nomnye umntu njengo mngeni. Kuya kufuneka baxoxe ngemida kunye nezivumelwano neqabane labo ngaphambi kokuhlala kunye.
Ukudityaniswa kwelanga le-Sagittarius kunye ne-Scorpio Moon kuthetha ukuba abemi banzulu kwaye bayakwazi ukubona umfanekiso omkhulu. I-Sagittarius Suns ngabafuna iNyaniso eQinisekileyo, abafundi beengcamango ze-cosmic kunye neengcamango zefilosofi.
Aba bantu bayathanda ukuphonononga izifundo zengqondo kunye nokubona indlela abanye abantu abacinga ngayo. Okukhona befundiswa, baya kuba nobulumko kunye nengqondo evulekileyo.
Njengokuba kunjalo, ukufumana ulwazi yeyona nto ibenza babekeke. Ungayichazanga indlela abanokonwaba ngayo xa bejongana nezinto ezingaqhelekanga nezingaziwayo.
Abahambi abakhulu, baya kuhamba kwiimbombo ezahlukeneyo zehlabathi ukuya kunxibelelana nezinye iinkcubeko. Abantu benyama, bafuna ukulinga kwaye bonwabele ulonwabo kangangoko banako.
Kwaye xa kufikwa kwinkululeko yabo, akukho namnye onokubabetha ekubeni bakhululeke ngakumbi. Xa iNyanga eScorpio ikwabandakanyekile, bayomelela kwaye bakwazi ngakumbi ukuphuma kuthuthu lwabo.
Ingqondo yeSagittarius Scorpios ihlala inomdla kwaye inengqiqo. Banokwenza ngokulula nawuphi na umsebenzi ofuna ukuba babenengqondo.
yintoni u-aprili 24 uphawu lwe-zodiac
Umzekelo, banokuba ngoogqirha, abanyangi kunye nososayensi. Njengoko bekutshiwo ngaphambili, zizilumko ezikwabakho ngokomoya.
Ukuba baya kufunda ukusebenzisana kwaye bahlale endaweni enye ngaphezulu, baya kuphumelela ngakumbi kunokuba bebekulindele.
Ukugcina iimvakalelo zabo zisemgceni ukuze bangazigqithisi ngokwembono yeemvakalelo kuya kunceda kakhulu. Ukujolisa ngakumbi kunye nokuthatha isigqibo sokungasebenzi ngokuziphatha okufanayo ngalo lonke ixesha kuya kuba luncedo olukhulu.
Isithandwa sokuthatha isigqibo
I-Sagittarius Sun abantu bahlala befuna okungakumbi kuwo wonke umntu nayo yonke into kuba iplanethi yabo elawulayo yirhuluneli yokwanda. Kwaye aba bomthonyama abayi kuthandabuza ukuhlala ubomi babo ubuninzi.
Xa kuziwa kubomi babo bothando, bayapha, kwaye bayathanda ukudlala kwigumbi lokulala, njengoko kuchatshazelwe yinyanga yabo eScorpio.
Iqabane labo alisoze likwazi ukubaxelela 'Hayi' kuba banencasa kwaye bayaqiniseka. Yiyo loo nto bafuna umntu ophantsi emhlabeni kwaye anganikezeli ngokulula.
Bangamaqabane anamandla aya kuhlala ejonga iimvakalelo ezinzulu zesithandwa sabo. Ukutshutshiswa okungaphezulu kuyabacima. Bafuna ukusondelelana kwaye banokutyhala umntu ukuya kumda.
Xa beya kwi-adventure yabo, baya kunqwenela ukuthatha esinye isiqingatha kunye nabo. Ngenxa yokuba benyanzelekile ngokweemvakalelo kwaye banamandla, kunokwenzeka ukuba babe nomona kwaye babenempahla ngaphandle kwesizathu.
Indoda yeSagittarius Sun Scorpio yeNyanga
Ama-Sagittarians ngamanye amaxesha anokugcinwa kwaye ahlaziye. Kwaye xa usongeza icala elifihlakeleyo leenyanga zeScorpio kwindoda eyiArcher, ufumana umntu onganxibelelanisi ngokulula, nokuba usekhaya okanye emsebenzini.
Ungayichazanga indlela amabi ngayo lo mfo. Rhoqo uneempahla, unyanzelisa lonke ixesha ukuba izinto zenziwe ngendlela yakhe. Kwaye akasayi kuthandabuza ukushiya ukuba kuya kwenzeka into eyahlukileyo. Kungenxa yoko kunokuba nzima njengendoda okanye utata.
Kodwa ukuba ufuna into enomdla kunye nexesha elifutshane, indoda yeSagittarius Sun Scorpio Moon inokuba liqabane elifanelekileyo kuwe. Ulumkile kwaye unengqiqo, lo mfo uyikhathalele kakhulu imali yakhe.
Ubambelele ngokuqinileyo kwiimfihlo zakhe, kodwa ufuna ukwazi lonke iqabane lakhe. Akukho nto iya kumnqanda ekufezekiseni iinjongo zakhe.
Unamandla kakhulu kwaye uzimisele, uya kuhlala efumana into ayifunayo ebomini. Ngenxa yokuba uyamamela kwaye uyakwazi ukubona ebantwini, umgwebo wakhe kwabanye uya kuba ulungile.
Njengomhlobo, indoda enolu manyano lweNyanga yeLanga inokuthenjwa kwaye inobubele. Kodwa unokuba nempindezelo enkulu kwaye abe yingozi xa sele uwelile. Kungenxa yoko le nto kuya kuba ngcono ukuba ungangxoli naye.
Xa kufikwa kwiminqweno yesini, uya kuyidlala ukuba ingade ibonakaliswe ngobuqili. Nguye udidi olunomdla ebhedini, hayi eyokufuna ukwazi.
Umfazi we-Sagittarius Sun Scorpio Moon
Eli bhinqa lelinye lawona manenekazi awanelisekayo nokuzimeleyo kwi-zodiac. Unokukhathalela iqabane ukuba uthandana ngokwenene. Xa uceliwe ukuba uncede ngengxaki, unokuthembela kuye ukuba enze konke anokukwenza.
Kodwa kunqabile ukuba amnike iingcebiso. Kwaye xa eza kuthi enze into elungileyo, soze acalucalule.
Umsebenzi okhutheleyo, oogxa kunye nabaphathi baya kumthanda nokuba akazukubathanda. Umfazi we-Sagittarius Sun Scorpio Moon ufuna ukuphumelela, kodwa uyayazi into yokuba ufuna abantu abanakho ukumngqonga ukuze kwenzeke oku.
Xa ukwimeko embi, lindela ukuba ahlekise kwaye abuyelane ngokukhawuleza okukhulu. Eli nenekazi lelona libaluleke kakhulu kwaye lilungisiwe kuzo zonke iiSagittarians.
Inyanga yakhe eScorpio imenza afihle ngakumbi. Awusoze umfumane elila okanye elangazelela ukuthetha ngeengxaki zakhe. Yiyo loo nto ngamanye amaxesha angazifumana enengxaki kwaye engazi ukuba makathini.
Kakhulu ngokweemvakalelo, unokuzibhubhisa ngokulula njengoko abanye benxiba iimpahla zabo. Xa ezakuba ngumama, lindela ukuba eme nabantwana bakhe nokuba uphoxekile kubo.
Ebhedini, lo mfazi we-Sagittarius une-libido ephezulu kunye nesini esiyingozi. Uya kudlala nayiphi na into emnandi kuba akanantloni kwaphela xa esemathandweni.
Inyanga kwiNkcazo yoBuntu beScorpio
Ukuhambelana kweSagittarius kunye neempawu zelanga
I-Sagittarius Best Match: Ngubani ohambelana kakhulu naye
Ukuhambelana kweSagittarius Soulmate: Ngubani uMlingane wabo woBomi bonke?
Uhlalutyo olunokujonga into ekuthethwa ngayo ukuba yiSagittarius
Iimpawu eziphambili zoMqondiso woMlilo we-Chinese Chinese Zodiac Sign
Ngomhla we-6 ku-Matshi iZodiac ziiPisces-Ubuntu obupheleleyo beHososcope
Leo intombazana kunye nenkwenkwezela ye-scorpio
ipisces eyindoda kunye neepisces zowasetyhini
capricorn indoda gemini umfazi ebhedini
Isayina Chinese zodiac yango-1965